Kuenzanisa neyakajairika piyano, dhijitari piano haina kunetsa, zvese zvaunoda kuti uite plugging-in; kukununura kubva kurongedza piano. Uye imwe inotakurika modhi yedhijitari piano inogona kutakurwa chero nguva. Izvi zvakakwana kune vechidiki vanofarira piyano, asi vanofanirwa kufamba kazhinji, kana kunyangwe ...
“Kunyangwe kudzimwa kwemimwe mirairo yekukunze kwenyika kwakakonzerwa nedenda iri, ndaisatarisira kuwana maodha mazhinji nekuvimba nenhepfenyuro yemazuva ano. Yakanga iri tsaona yakanaka! ” Pamasikati aMay 30, Zhu Li, sachigaro wePlume Piano Kugadzira (Wuhan) Co, Ltd., ...
Zvese nezve piano yedhijitari
Zvakanakira piyano yemagetsi: 1, Kuenzanisa neyakajairwa acoustic piano, dijitori piano yakachipa kwazvo. 2, piano yedhijitari haigare munzvimbo zhinji. 3, Zviri nyore kwazvo kutenderera. 4, Izwi rinogara rakanaka. 5, Yakaderera yekuchengetedza mitengo. 6, Unogona kushandisa mahedhifoni, kwete kunetsa muvakidzani wako ...
Magetsi Grand Piano, Yakaderera Mutengo Dhijitari Piano, Magetsi Akarurama Piyano, Dhijitari Piano Kugadzirisa, Smart Piano Khibhodi, Dhijitari Yakatwasuka Piano,